बर्दियाको चुनावमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ चुनावी रौनक - Khula Patra
प्रकाशित समय: १७:३६:०४
बर्दिया । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका कारण बर्दियाका चोक, चौतारा र चिया पसलहरुमा चुनावकै चर्चा परिचर्चा छ । चुनाव कसले जित्छ ? कसले हार्छ ? भनेर मतदाताहरुले आँकलन गरिरहेका छन् । बर्दियामा प्रमुख पार्टीहरु अर्थात दुबै गठबन्धनबिच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपछी चुनावी माहोल रोचक बनेको छ । बर्दियाको २ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा दुबै गठबन्धनका चारै जना उम्मेदवार मन्त्रि र केन्द्रीय स्तरका नेता भएका कारण पनि बर्दियाको चुनावी माहोल रोचक बनेको हो ।
वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका सन्तकुमार थारु यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा विजयी हुनुभएको थियो भने थारु शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछी चार महिनाअघि पशुपंक्षी विकास मन्त्री हुनुभएको थियो । लोकतान्तिक गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका गोपाल दहित यसअघि संबिधानसभा चुनावमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट समानुपातिक सभासद हुनुभएको थियो । दहित शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछी केही महिना अघि भूमिसुधार मन्त्री हुनुभएको थियो । दुबै उम्मेदवार थारु बस्तिमा आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न भन्दै चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । दुई पटक जीतेर विकासका लागि अग्रसर भइरहेको नारा माओवादी केन्द्र सन्तकुमार थारुको छ भने यसअघि समानुपातिकबाट जीतेर बर्दियाको विकासका लागि निरन्तर लागिरहेको पढेलेखेको थारुको बच्चा हुँ, थारु समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रको विकासमा र थारु समुदायको उत्थानका लागि भन्ने नारा कांग्रेसका गोपाल दहितको छ ।
-उज्यालो अनलाइनबाट ।